Myat Shu - နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
You are here : Myat Shu » Archives for နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
Published By Myat Shu On Friday, November 30th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
“လာလေ… လာလေ…” စိတ်ရှည်ရှည်ထားပြီး နှုတ်က နူးညံ့ညင်သာစွာ ပြောရင်း လူကလည်း သူ့အနားကို ဖြည်းညင်းချင်း တိုးသွားလိုက်သည်။ စိတ်ထဲတွင် မကြာခင် သူကလေးကို ထွေးပွေ့နိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်နေမိသည်။ အရိုင်းဆန်ဆန် မျက်လုံးများနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုကြောင့် တဆတ်ဆတ် တုန်ခါနေသော်လည်း တသုန်သုန်တိုက်ခတ်နေသော လေကြောင့် တကိုယ်လုံးရှိ အမွေးအဆံများ ဖွာလန်ကြဲနေတော့ တစ်မျိုးတိုးပြီး သာ၍ ချစ်စရာကောင်းနေသည်။ ပါးစပ်ကလည်း “မီ..မီ..မီ” အသံပေး၍ အဆက်မပြတ်ခေါ်လိုက်မိသည်။ သူ့ဆီ ရောက်ဖို့အတွက် နေရာက တော်တော်လေး ကျဉ်းသည်။ ဆိုင်ခန်းနှင့် ၀င်းထရံကြား ခပ်ကျဉ်းကျဉ်းမို့ ပင့်ကူအိမ်တွေကိုလည်း တိုးရသည်။ စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဆွဲဆန့်လိုက်ကာ လူကလည်း သူ့အနီးသို့ရောက်လာ။ အသာအယာ ထိမယ် ဟန်လုပ်ခိုက်….။ ခွီးကနဲ မာန်ဖီသံနဲ့အတူ မြန်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း၊ ကံကောင်းလို့ ... Continue Reading
Picture: Mya Thway Ni “ ပွမ်… ပွမ်.. ပွမ် ” ကားကို စက်ရှိန်လျှော့လို့ ဂငယ်ကွေ့ကွေ့လိုက်ပြီး ခြံရှေ့ကို ကားခေါင်းထိုးလျက် ဟွန်းနှစ်ချက် အသံပေးရုံလေး တီးလိုက်မိတယ်။ ကလေးမလေးတစ်ယောက် အပြေးအလွှားထွက်လာပြီး ခြံတံခါးကို ဖွင့်ပေးတယ်။ ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက် စနစ်တကျပုံသွင်းထားတဲ့ စက္ကူပန်းခြုံတွေနဲ့ ကုန်းတက်လမ်းကို အခါခါ ဖြတ်မောင်းနေကြမို့ မျက်စိမှိတ် မောင်းမယ်ဆိုရင်တောင် ကျုပ် မောင်းနိုင်နေပါပြီ။ ကုန်းတက်အတိုင်း တစ်မိနစ်လောက် မောင်းလာခဲ့ပြီး ပေါ်တီကိုအောက်မှာ ကားကို ညင်ညင်သာသာ ရပ်လိုက်တယ်။ အမှောင်ရိပ်မသမ်းသေးပေမယ့် ခြံထဲမှာတော့ နေရာအနှံ့ ထွန်းညှိထားတဲ့ ရောင်စုံမီးတွေက တဖျပ်ဖျပ်လင်းလက်လို့ နေတယ်။ ကားရပ်လိုက်တာနဲ့ ကျင့်သားရနေတဲ့ ကျုပ်ရဲ့ခြေထောက်တွေက ကားပေါ်က ဆင်းပြီးသား ဖြစ်နေတယ်။ ... Continue Reading
သူရာလေး ဖက်နေတာတောင် အတိတ်ဘဝ ကုသိုလ်က ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ facebook ဘော်ဒါတယောက်ရဲ့ အဆိုအရ… အမေရိကရောက်ပြီး ၁၀ ရက် မပြည့်ခင်မှာ ကိုယ်အလုပ်ရခဲ့တယ်။ minimum wage ပါပဲ။ ကိုယ် အမေရိက ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ညီမအငယ် Sandra နေတဲ့ Inglewood မှာ နေတယ်။ Inglewood ဆိုတာ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်လေဆိပ်နဲ့ ကပ်လျက် city ပါ။ ညီမ အိမ်ရောက်တော့ အိမ်ရှေ့ဧည့်ခန်းမှာ ညီမက ခရီးသွားဖို့ အထုပ်အပိုးတွေ ပြင်ထားချထားတာ မြင်လို့…. “ဒါတွေက ဘာတွေလဲ…” လို့ ကိုယ်က မေးတယ်။ “သန်ဘက်ခါ.. ဗမာပြည်သွားမလို့.. မေမေ နေမကောင်းဖြစ်နေတယ်.. ကိုကို အိမ်စောင့်ပြီးနေခဲ့….” တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ အမေရိကမှာ တယောက်ထဲ ... Continue Reading
ကျွမ်းသူကြောင့် ငိုလေဖူး မှိုင်းမူးဖြေခဲ့ပြီ
Published By Myat Shu On Thursday, November 22nd 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
Photo: Nyi Nyi Win မိုးရွာမယ်လို့ ထင်တော့ အထင်သား။ မနက်ကတည်းက ကောင်းကင်က မကြည်လင်ဘူး။ သို့ပေသိ စိမ့် ထီးမယူလာခဲ့မိဘူး။ မိုးအုံ့ပေမယ့် ရွာမယ် မရွာမယ် သေချာ မသိနိုင်တဲ့အရပ်ပေပဲ။ ရွာပြန်တော့လည်း ဖွဲသလို စဲမလိုနဲ့ ဒီအရပ်ရွာတဲ့မိုး သူ့ကို တခါမှ မစိုခဲ့ဘူး။ သူတို့ ငယ်ဘ၀ ကောင်းကင်ကတော့ ဒီလို မဟုတ်လေဘူး။ မိုးအုံ့တယ်ဆိုကတည်းက ရွာကိုရွာမှာ။ မိုးရေကြောင့် စွတ်စိုအေးမြ စိုရွဲမှာ သေချာတဲ့ ကောင်းကင်ပါ။ သည်းတဲ့မိုးကြောင့် ညက ပို တိတ်ဆိတ်မှောင်မိုက် နေသလိုဘဲ။ မိုးပေါက်ကျသံနဲ့ ရထားသံ ရောထွေးကြားရတော့ ရင်တခုလုံး လေးလံထိုင်းမှိုင်းပြီး ဆွတ်ကျင်စိတ် ၀င်လာတယ်။ အဲဒီအသံကို ကြားတိုင်း စိမ့် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, November 21st 2012. Under မျက်ရှု, ဆောင်းပါး, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
ဆရာဦးလှဘေကို၂ဝဝ၇ မေလက မော်လမြိုင်မြို့ နေအိမ်တွင် နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့သည်။ တောင်ဝိုင်းထဲက အိမ်ကလေးမှာ ခြံကျယ်ကြီး အလယ်တွင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ရှိသည်။ လန်ဒန် မြောက်ဘက် ဝယ်လ်ဝင် ဥယျာဉ်မြို့မှာ နေခဲ့ရသည့် ဘဝကို ဇာတိရပ်ရွာတွင် ပြန်ရသည်မှာ ဆရာတို့ ကံကောင်းပါသည်။ ဆရာ့ကို လူချင်း ပထမ တွေ့စဉ်ကနှင့်မတူ၊ သတိ ချွတ်ချော်လာပြီ (မဆုံးခင် ၂ လ အလို)။ ခင်ဗျား ဘာနဲ့ လာလဲ သင်္ဘောနဲ့လား လေယာဉ်နဲ့လားဟု ထပ်ခါ ထပ်ခါ မေးသည်။ ဘိလပ် ရောက်တော့ သူစာသင်ခဲ့သည့် ဌာနက ဌာနမှူးရုံးခန်းဝတွင် သူ့ပုံနှင့် ဆုံးသည့်အကြောင်းစာ၊ ကျောင်းတနေရာက ရှေးဆရာများ စုဝေး ရိုက်သည့်ပုံတွင် ၁၉၅ဝ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, November 17th 2012. Under မျက်ရှု, အက်ဆေး, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
firegoatgallery.com (၁) “ညီညွတ်ရေးနဲ့ အသက်ရှည်ရှည်ခင်ခင်မင်မင် ၊ လက်ရေတပြည်တည်း... အို . . ရှေးကထက် ပိုချစ်ကြတယ်” မူလတန်းကျောင်းသားဘ၀မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကန်းထရီးဆရာကြီး တွံတေးသိန်းတန်ရဲ့ “ထွေးညို”နဲ့ ကြီးပြင်း၊ အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ရောက်တော့ မြန်မာပရက်စလေ ၀င်းဦးရဲ့ “မီးပုံပွဲမယ် စုကာဝေးကာ အပေါင်းအဖော်များနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်” သီချင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်၊ အထက်တန်းကျောင်းသား လူပျိုဖော်ဝင်စမှာတော့ တက္ကသိုလ်ထွန်းနောင်ရဲ့ “မာမီရယ်ရှာပေးကွယ်၊ ရည်းစားလိုချင်တယ်”၊ ဂျင်မီဂျက်ရဲ့ စက်ခေါင်း အမှတ် (၀၀၉)၊ မင်းမင်းလတ် ရဲ့ “အပေါ်ထပ်နဲ့ အောက်ထပ်ဇာတ်လမ်း” တွေနဲ့လူလားမြောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ထဲမှာ ဘာ့ကြောင့်မှန်းမသိ၊ ခုတလော “လက်ရေတပြင်တည်း” သီချင်းစာသားတစ်ပိုဒ်ကိုပဲ ထပ်ခါတလဲလဲ ဆိုနေမိတယ်။ တောင်တောင်အီအီအတွေးတွေ ခေါင်းထဲမှာ ချာလည်လှည့်လာလေလေ၊ ဒီသီချင်းစာသားကို အသံ ကျယ်ကျယ် ... Continue Reading
ကျွန်မ .. ပြတင်းတစ်ပေါက်စာ အိပ်မက်ရှုခင်းနဲ့ ကြယ်မစုံသော နံနက်ခင်းကောင်းကင်
Published By Myat Shu On Saturday, November 10th 2012. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, နှစ်နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်
တနင်္ဂနွေ မနက်ခင်းလေးတစ်ခုမှာ ကျွန်မ အိပ်ရာက ထလာတဲ့ထိ တစ်ရေးမှ မအိပ်လိုက်ရသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ထုံးစံအတိုင်း နံနက်ခင်းကတော့ ဝတ္တရားမပျက် ကျွန်မကို အိပ်ရေးဝခဲ့သူတွေကို ကြိုဆိုသလိုပဲ ကြိုဆိုနေခဲ့တယ်။ ဟိုး ကောင်းကင် အစွန်းစဆီမှာ ရောင်နီက သန်းလုသန်းခင်နဲ့ ကမ္ဘာမြေဆီကို နေရောင်တွေ ပြန်ဝင်လာတော့မယ် ဆိုတဲ့ အရိပ်အယောင်တွေ အပြည့်နဲ့ .. ။ အရှုံးပေးလိုဟန် မတူသေးတဲ့ အမှောင်ထု ခပ်ကျဲကျဲပါးပါးက မာန်တင်းထားပေမယ့် သူ့ကောင်းကင်မှာ ကြယ်တစ်လုံးမှ မကျန်တော့ဘူး။ မနက်ခင်းတိုင်း လင်းလက်နေတတ်တဲ့ သောကြာကြယ်တောင် ဘယ်အရောင်နဲ့ ပျောက်ဆုံးနေခဲ့လေသလဲ မသိ ..။ အရာရာတိုင်းဟာ တသမတ်တည်း မသွားဘူးဆိုတာ ကျွန်မ ငယ်ငယ်တည်းက သိခဲ့တာပဲ။ ငယ်စဉ်က ရခဲ့တဲ့ ... Continue Reading